पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २.३२ पैसा ! कहाँ होला ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठरोचक समाचारपेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २.३२ पैसा ! कहाँ होला ?
पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २.३२ पैसा ! कहाँ होला ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले मंगलबार साँझ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्यो । पछिल्लो मूल्यअनुसार नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ११४ पुगेको छ ।भारतमा पछिल्लो १५ दिनमा ११ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ । नेपाल भारतमा निर्भर छ । भारतले तयार पारेको पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल आयल निगमले खरिद गरेर ल्याउने गरेको छ ।भारतीय आयल कर्पोरेशनले हरेक १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसूची पठाउँछ र सोही आधारमा नेपालमा मूल्य निर्धारण हुन्छ ।नेपालमा करलगायतका अन्य खर्च जोडेर निगमले बिक्री गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पछिल्लो १३ महिनामा बढेर सबैभन्दा उच्च स्थानमा पुगेको छ । यस वर्ष कच्चा तेलको मूल्यमा २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । १ जनवरीमा बेञ्च क्रुडको मूल्य प्रतिव्यारेल ५१ अमेरिकी डलरमा थियो ।अहिले यो बढेर ६३ डलरमाथि पुगेको छ । सोही कारण संसारभर नै आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पनि देखा परेको छ । संसारभर नै इन्धनको उच्च माग भइरहेको छ ।पछिल्लो पटक भएको मूल्यवृद्धिको असर संसारभर नै परेको छ ।भुटानमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ७९.२९ रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस्तै पाकिस्तानमा ८१.८२ पुगेको छ । श्रीलंकामा ९६.४१ रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालमा ११४ पुगेको छ । बंगलादेशमा १२२.२५ पुगेको छ ।संसारका ठूला भनिएका देशमा समेत पेट्रोलको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ । अमेरिकामा ८७.४४ रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।यस्तै, जर्मनीमा १९०.७५ रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यस्तै जापानमा १५१.६१ रुपैयाँ बराबर भएको छ । चीनमा ११९.५८ पुगेको छ । रुसमा पनि असर देखा पर्दा पेट्रोलको मूल्य नेपाली रुपैयाँमा ७५.८४ बराबर भएको छ ।त्यस्तै संसारका केही देशमा भने पेट्रोलको मूल्य असाध्यै सस्तो रहेको छ ।
भेनेजुयलामा प्रतिलिटर २.३२ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै, इरानमा ७.२ रुपैयाँ, अंगोलामा २८.५१, अल्जेरियामा ४०.२४, कुवेतमा ४०.४१ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।हङकङमा सबैभन्दा महंगो रहेको छ । सो देशमा एक लिटर पेट्रोलका लागि नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा २७९ पर्न जान्छ । सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा २३६.९२ पर्न जान्छ । नेदरल्याण्डमा २३५.८०, ग्रीसमा २१६.९७ पर्न जान्छ । नर्वेमा २२९.४५ पर्न जान्छ ।